Qodobo laga soo saaray kulankii Madaxweynayaasha Galmudug & Puntland - Awdinle Online
Qodobo laga soo saaray kulankii Madaxweynayaasha Galmudug & Puntland
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug waxaa Maanta lagu qabtay Shirka iskaashiga Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Puntland, kaas oo ay ka qeyb-galeen Madaxweynayaasha labada maamul ee Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor & Saciid Cabdullaahi Deni.
Shirka ayaa waxaa looga hadlay dardar gelinta iskaashiga labada xukuumadood ee Arrimaha amniga degaannada Gobolka Mudug iyo Doorashada qaran ee lagu muransan yahay.
Shirka ayaa waxaa kasoo baxay dhowr qodob oo muhim u ah labada maalin iyo sidii loo wadi laha xalka gaarista arrimaha muranka ka taagan ee hareeyay qabsoomida doorashooyinka dalka.
Qodobada Shirka kasoo baxay ayaa waxaa kamid ah
1: in ay ku heshiiyeen labada Madaxweyne inay ka wada shaqeeyaan sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen dhinacyada ku kala aragtida duwan hannaanka qabsoomidda doorashada.
2: In labada Maamul ee puntland & Galmudug ay iska kaashadaan sugida Amniga degaannada Galmudug oo bilihii la soo dhaafay ay ka dhaceen falal Amni darro.
Shirka waxaa goobjoog ka ahaa Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, Wasiiro iyo Saraakiil Madaxtooyo oo ka tirsan Puntland iyo Galmudug iyo Guddoomiyeyaasha Gobolada iyo Degmooyinka ee labada dhinac ee Gobolka Mudug.
Previous articleCiidamo ka tirsan AMIOSM oo ku dhintay qarax lala beegsaday
Next articleGuddoomiyaha Aqalka sare & Siyaasiyiin qoraal xasaasi ah soo saaray